Hariiroo cimaa Ityoophiyaa fi Jibuutii gama dhiigaan, aadaa, amantaa fi afaaniin jiru waliiti dhufeenya diinagdeetti jijjiiruuf hojjetamuu qaba – Preezdaant Saahilawarq – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Hariiroo cimaa Ityoophiyaa fi Jibuutii gama dhiigaan, aadaa, amantaa fi afaaniin jiru waliiti dhufeenya diinagdeetti jijjiiruuf hojjetamuu qaba – Preezdaant Saahilawarq
On Nov 30, 2020 159
Finfinnee, Sadaasa 21, 2013 (FBC) – Preezdaantiin FDRI Saahilawarq Zawdeen Mana Maree Biyyaleessa Jibuutiitti argamuun haasawa taasiisaniiru.
Mana marichaatti keessummaa kabajaa ta’uun kan argaman Preezdaant Saahilawarq biyyoonni lameen dhiigaan, aadaa, amantaa fi afaaniin hariiroo cimaa qabaachuu ibsaniiru.
Carraa guddaa kana gara walitti dhufeenya diinagdeetti jijjiiruuf hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru.
Preezdaantiin mana marichaa Mahaammad Alii Hoomeed gama isaaniin biyyi isaanii nageenyaa fi badhaadhina mirkaneessuuf Ityoophiyaa cinaa ni dhaabbatti jedhan.
Walga’ii kanarratti miseensoota Mana Maree biyyattii, Jibuutiitti ambaasaaddara Ityoophiyaa obbo Birihaanuu Tsaggaayyee, bakka buutoonni hawaasa Dippiloomaatikii, dhaabbileen miti mootummaa fi aanga’oonni naannoo argamaniiru jedhame.
Yuunvarsiitiin Arsii fi barattoonni Yuunvarsiitii Dabrabiraan duraanii lammiilee…
Giddu Seentummaan dhimma keessoo biyyoota Afrikaarratti…
Oduu biyya keessaa10557